भागवत भट्टराई काठमाडौं, १३ जेठ
अर्थमन्त्रालयले सवा १६ खर्ब रुपैयाँको माथिको बजेट ल्याउने तयारी गरेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गरेता पनि अन्तत स्रोतमा दबाब परेपछि करिव १६ खर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउने भएको छ ।
करिब बजेटको अंक तय भएसँगै विशेष कार्यक्रम बाहेकका कार्यक्रम राखेर अर्थमन्त्रालयले मंगलबार रातो किताब छाप्न पठाएको छ । बजेट ल्याउनुभन्दा एक दिन अघि रातो किताब छाप्ने गरिन्छ । अर्थमन्त्रालय विशेष स्रोतका अनुसार सोमबार राति काम सकेसँगै मंगलबार बिहान ७ बजे रातो किताब छाप्न पठाइएको हो ।
रातो किताबमा व्यायको अनुमानको विवरण विस्तृत रुपमा राख्ने गरिन्छ । विशेष कार्यक्रम बाहेकको खर्च यो पुस्तकमा खुलाइएको हुन्छ । रातो किताबमा संघीय संचित कोषमाथि व्यायभार हुने अनुमान, व्यायभार हुने अनुमानको खर्चको शीर्षकगत अनुमान, संञ्चितकोषबाट विनियोजन हुने व्यायको अनुमान, एकीकृत खर्च तथा वित्तीय बजेटको अनुमानको विस्तृत विवरण राखिएको हुन्छ ।
त्यस्तै रातो किताबमा अनुदान तथा साहायतका विवरण बैदेशिक अनु्दान तथा ऋणकको विषयमा विरवरण खुलाइन्छ । अर्थमन्त्रालयले अब बजेट भाषण पुस्तिकाको साथै आर्थिक तथा विनियोजन ऐन बाहेकका सबै काम सकेको छ ।
आर्थिक सर्वेक्षण, मन्त्रालयत विवरण र पहेलो किताब छापिसकेर अर्थमा आएका छन् । ८ महिनाको तथ्यांकमा केन्द्रित आर्थिक सर्वैक्षण अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संसदमा प्रस्तुत गर्दै छन् ।
अर्थमन्त्रीले संसदमा पढ्ने बजेट पुस्तिका र विनियोजन ऐन छाप्नु पर्ने हुन्छ । विनियोजन ऐन अर्थमन्त्रालयमित्र छापिन्छ भने बजेट जेठ १४ गते काम सकेर त्यसै राति नसके बिहान मुद्रण विभागमा पठाउने गरिन्छ ।
१५ खर्ब रुपैयाँ माथिको बजेट ल्याउन सक्ने अवस्था नरहेपनि स्रोतको महत्वकांक्षी लक्ष राखेर १६ खर्ब हाराहारीको बजेट पुर्‍याइएको बताइएको छ । अर्थमन्त्रालय स्रोतका अनुसार वैदेशिक ऋणमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अपेक्षा गरेजसरी प्रतिवद्धता आएको छैन ।
बजेट लेखनको क्रममा अधिक साढे १६ खर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेटमा छलफल भएता पनि स्रोतको दबाब परेपछि क्रमश बजेट घटाइएको थियो । गत वर्षहरुको तुलनामा स्वास्थ्य, कृषि , श्रमका क्षेत्रमा बजेट बढाइएको छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, जेठ १३, २०७७, ०९:५६:००
५७७ स्थानीय तहलाई रोयल्टी : विद्युत‍्मा तामाकोसी र पर्वतारोहणमा पासाङ ल्हामू अगाडि
७ सय स्थानीय तहले आगामी वर्षको बजेट पेस गरे, ५३ को अझै बाँकी